News - ကွဲပြားခြားနားသောထည်များနှင့်ခြားနားချက် Antistatic ထည်များသည် Polyester ကိုအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်သနည်း။
လေ့ဝါဂွမ်းအဖြစ်လူသိများ။ အဆိုပါဖိုင်ဘာအထည်အလိပ်နှင့်စောင်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဝါဂွမ်းအမျှင်များသည်မြင့်မားသောစွမ်းအား၊ လေထုစိမ့် ၀ င်မှုကောင်းခြင်း၊ တွန့်ခြင်းခံနိုင်ရည်အားနည်းခြင်း၊ ၄ င်းသည်ကောင်းမွန်သောအပူခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အက်ဆစ်ဓာတ်ခံနိုင်ရည်အားနည်းပြီးအခန်းအပူချိန်တွင်အယ်လကာလီကိုပျော့ပြောင်းစေသည်။ ၎င်းသည်ဆိုးဆေးများအတွက်ကောင်းသောခင်မင်မှု၊ ဆေးဆိုးရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ဝါဂွမ်းအမျိုးအစားထည်ဆိုသည်မှာဝါဂွမ်းချည်သို့မဟုတ်ချည်နှင့်ချည်မျှင်ဓာတုအမျှင်ရောစပ်ထားသောချည်ဖြင့်ပြုလုပ်သောထည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
၁။ ၎င်းသည်ခိုင်ခံ့သောဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့်ကြီးမားသောကျုံ့မှု ၄% မှ ၁၀% အထိရှိသည်။
၂။ အယ်ကာလီနှင့်အက်စစ်ခုခံခြင်း။ ဝါဂွမ်းအထည်များသည်အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်နှင့်အလွန်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး၊ အလွန်ပျော်ဝင်နေသောဆာလ်ဖာအက်ဆစ်ပင်လျှင်၎င်းကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်သည်အားနည်းနေသည်။ လဲမှို့အထည်ကပို alkali ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် dilute alkali သည်အခန်းအပူချိန်တွင်ဝါဂွမ်းအထည်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသော်လည်း၊ “ Mercerized” ဝါဂွမ်းအထည်ကိုဝါဂွမ်းအထည်ကို ၂၀% caustic soda ဖြင့်ကုသခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
3. အလင်းခုခံခြင်းနှင့်အပူခုခံဘုံဖြစ်ကြသည်။ နေနှင့်လေထုထဲတွင်ဝါဂွမ်းအထည်ကိုဖြည်းညှင်းစွာအောက်စီဂျင်ပေးပြီးစွမ်းအားကိုလျှော့ချပေးသည်။ ချည်ထည်များသည်ရေရှည်မြင့်မားသောအပူချိန်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သော်လည်းရေတိုမြင့်မားသောအပူချိန်ကို ၁၂၅ မှ ၁၅၀ with အထိခံနိုင်သည်။
4. သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများသည်ဝါဂွမ်းထည်ကိုပျက်စီးစေသည်။ ၎င်းသည်မှိုကိုမခံနိုင်ပါ။
ဝါဂွမ်း poliester သည်ဝါနှင့် polyester နှင့်ရောသောအထည်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဒါဟာအနည်းငယ်ပိုဝါဂွမ်းပါရှိသည်။ ဝါဂွမ်း polyester ၏ဝိသေသလက္ခဏာများဝါဂွမ်းနှင့် polyester ၏အားသာချက်များကိုနှစ် ဦး စလုံးရှိသည်။ ဝါဂွမ်းဖိုင်ဘာသည်ဝါဂွမ်းနှင့်နိုင်လွန်အရောအနှောဖြစ်မည်လော။ လဲမှို့ဖိုင်ဘာသည်ပြုပြင်ထားသော polypropylene ဖိုင်ဘာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဝါဂွမ်းအမျှင်များ၏အဓိကစုပ်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုက၎င်းကိုပျော့ပျောင်းသောနွေး၊ ခြောက်သွေ့မှု၊ စူပါဝါဂွမ်းဖိုင်ဘာအတွင်းခံ၊ အဝတ်အစား၊ တီရှပ်နှင့်အသုံးဝင်သောမော်ဒယ်မှထုတ်လုပ်သောအခြားထုတ်ကုန်များသည်အပူထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရေစုပ်ယူခြင်း၊ အစိုဓာတ်ထိန်းခြင်း၊ အမြန်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားနှင့်အခြားဂုဏ်သတ္တိများ၏အားသာချက်များရှိသည်။
Spandex သည် elastic fiber အမျိုးအစားဖြစ်သော polyurethane fiber ၏အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသော elastic ဖြစ်ပြီး ၆-၇ ကြိမ်ဆန့်နိုင်သည်။ သို့သော်တင်းမာမှုပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်၎င်း၏ကန ဦး အခြေအနေသို့လျင်မြန်စွာပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ပျော့ပျောင်း။ ပျံ့နှံ့နိုင်သော polyurethane ကဲ့သို့သောကွင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခိုင်မာသောကွင်းဆက်အပိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးတက်စေသည်။
Spandex အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ elasticity ရှိပါတယ်။ အစွမ်းသတ္တိသည် latex fiber ထက် 2-3 ဆပိုမိုမြင့်မားသည်။ linear သိပ်သည်းမှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးဓာတုဗေဒပျက်စီးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Spandex သည်အက်စစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ချွေးခြင်း၊ ပင်လယ်ရေခုခံခြင်း၊ Spandex ကိုယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ယောက်တည်းမသုံးပါ။ သို့သော်၎င်းပမာဏအနည်းငယ်ကိုထည်ထဲသို့ရောစပ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောဖိုင်ဘာအမျိုးအစားသည်ရော်ဘာနှင့်အမျှင်နှစ်ခုလုံး၏ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ အများစုကို spandex နှင့် core ကို spunex core တွင်သုံးသည်။ ၎င်းမှာ spandex အဝတ်အချည်းစည်းမရှိသောပိုးနှင့် spandex နှင့်အခြားအမျှင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလိမ်သည့်ပိုးထည်လည်းရှိသည်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်အများအားဖြင့်အများအားဖြင့်ရက်ကန်း၊ ရက်ကန်းသားထည်များ၊ ယက်ထည်များနှင့် elastic အထည်များတွင်အသုံးပြုသည်။
Terylene သည်အဓိကအားဖြင့်အထည်အလိပ်အတွက်အသုံးပြုသည့် polyethylene terephthalate polyester fiber ၏ကုန်သွယ်ရေးအမည်ဖြစ်သောအရေးပါသောဒြပ်အမျှင်အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် Dacron ဟုလူသိများသော Dacron သည်အထည်အလိပ်နှင့်စက်မှုထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ Polyester အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပုံစံရှိပါတယ်။ setting ပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းသောပြားချပ်ချပ်, fluffy သို့မဟုတ် pleated polyester ချည်သို့မဟုတ်ထည်အသုံးပြုမှုအတွက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆေးကြောပြီးလျှင်ပြီးနောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။ Polyester သည်အရိုးရှင်းဆုံးအမျှင်သုံးမျိုးအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအရိုးရှင်းဆုံးနည်းပညာနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ခိုင်ခံ့ပြီးတာရှည်ခံခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော elasticity နှင့်ပုံသဏ္easyာန်မမှန်ခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ လျှပ်ကာမှု၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ဆေးကြောနိုင်မှုနှင့်ခြောက်သွေ့မှုစသည်တို့ရှိသည်။
လက်ရှိစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ မိုက်ခရိုအီလက်ထရောနစ်လုပ်ငန်း၊ ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်း၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနှင့်အစရှိသဖြင့် anti-static အဝတ်အထည်များကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြပြီး anti-static တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။
ငါတို့သိသည့်အတိုင်း anti-static အဝတ်အထည်၏အဓိကအရာဖြစ်သော anti-static သန့်ရှင်းသောထည်၊ ယင်း၏ရွေးချယ်မှုသည် anti-static အဝတ်အစား၏ anti-static effect ကိုသက်ရောက်သည်။ Anti- ငြိမ်စူပါစင်ကြယ်သောအထည်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ polyester ထည်သည် polyester နန်းကြိုးအမျှင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအထူးသဖြင့်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်သည့်နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည်ကြာရှည်စွာနှင့်လောင်ဂျီကျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Xiaobian သည် polyester anti-static ထည်ကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားအကြံပြုရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ၎င်းသည်ကောင်းသော anti-static function ကိုသာမကဘဲထည်ဖိုင်ဘာသို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်များကိုထည်ကွာဟမှုများမှကျခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး၎င်းသည်မြင့်မားသောလက္ခဏာများရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်နှင့်အဝတ်လျှော်ခုခံ; ၎င်းကိုသန့်ရှင်းသောအခန်း ၁၀ မှ ၁၀ တန်းအထိသန့်ရှင်းသောအခန်းတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုမိုက်ခရိုအီလက်ထရောနစ်၊ အော်တိုအီလက်ထရောနစ်၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်အခြားလျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှသက်ရောက်သောသန့်ရှင်းမှုအလွန်လိုအပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် polyester fiber သည်အလွန်ရှည်သောကြောင့် wool chips များထုတ်လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ထည်၏ electrostatic discharge discharge effect သည်အတွင်းပိုင်းတွင် ၀.၅ စင်တီမီတာမှ ၀.၂၅ စင်တီမီတာအထိတူညီသောအကွာအဝေးရှိပို့ဆောင်နေသောဝါယာကြိုး (ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဝါယာကြိုး) ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။